EPL NEWS Archives - Page 654 of 707 - SPORTS MYANMAR
ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားကို ရွေးချယ်သွားခဲ့တဲ့ ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား
မန်ချက်စတာစီးတီး ကွင်းလယ်လူ ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား ဟာ လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုး ဆာဒီယိုမာနေး ကို ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား အဖြစ် မှတ်ချက် ပေးလိုက် ပါတယ်။ လီဗာပူး နဲ့ မန်စီးတီး တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်း အတွင်း ပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေ ဖြစ်လာ ကြပြီး လက်ရှိ အချိန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် …
အလှောင်ခံဘဝမှ ဂန္ထဝင်အဖြစ်သို့ . . . The Story of Didier Drogba ( ဒုတိယတွဲ )
အပိုင်း ( ၃ ) – အင်္ဂလန်ပွဲဦးထွက်ရာသီ နဲ့ အဆီအငေါ်မတည့်တဲ့ နေ့ရက်များ ဒရော့ဘာ ရဲ့ ချဲလ်ဆီးကစားသမား ဘဝအစဟာ တော်တော်လေး အဆီအငေါ်မတည့်ခဲ့ပါဘူး ။ အင်္ဂလိပ် စကားကို ကောင်းကောင်းမပြောတတ်သလို အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေး ပစ္စည်းတွေနဲ့လည်း အသားမကျခဲ့ပါဘူး ။ အဆိုးဆုံးကတော့ ဂျွန်တယ်ရီ ကိုတောင် မမှတ်မိတော့တာပါပဲ ။ “အရပ်မြင့်ပြီး …
Invincible အသင်းဖော်တွေထဲက ဘယ်သူတွေကို လက်ရှိ အာဆင်နယ် အသင်းထံ ခေါ်ချင်သလဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂီလ်ဘာတိုဆေးလ်ဗား
ဂန်းနား ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဂီလ်ဘာတို ဆေးလ်ဗား က သူတို့ရဲ့Invincible squad ထဲက အသင်းဖော်တွေကို လက်ရှိ အာဆင်နယ် အသင်းထံ ခေါ်ယူခွင့် ရပါက အသင်းဖော် သုံးဦး ကို ခေါ်ယူချင်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းက တစ်ရာသီလုံး ရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်နဲ့ Invincibles …
ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ် တွေ သဘောကျ ကျေနပ်စေမယ့် စကား ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလာတဲ့ #အိုဒွိုင်း
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ် တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား ကော်လမ် ဟတ်ဒ်ဆန် အိုဒွိုင်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ က နည်းပြဟောင်း မော်ရစ်ဇီယို ဆာရီ လက်အောက် မှာ ကစားခွင့် တွေ မရခဲ့တာကြောင့် ၊ အသင်း နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း ဆက်တိုးဖို့ …
ကော်တင်ဟို ကို ခေါ်ယူဖြစ်ခဲ့ပါက ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ အနာဂတ် မသေချာနိုင်တော့တဲ့ ကစားသမား က ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ #ဟတ်ချင်ဆန်
ကော်ဖီတောင် အတူ သောက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်တဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်းဖော်ဟောင်း နှစ်ဦးအမည်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ရွိုင်ကိန်း
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမားဟောင်း ဖြစ်သူ ရွိုင်ကိန်းက သူဟာ အသင်းဖော် ကစားသမားဟောင်း နှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဝိန်း ရွန်းနီ ၊ ရီယို ဖာဒီနန် တို့ အပေါ် နွေးထွေးမှု ပြသ သွားမှာ မဟုတ်ကြောင်း ၊ သူတို့ နှစ်ဦး ရဲ့ ကျီစယ်မုှ တွေကို …
ကစားသမား ဘဝ ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး စိတ်ပျက်ဖွယ် အခိုက်အတန့် တခု အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ #ဒီကလန်ရိုက်စ် လက်ရှိ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း ရဲ့ လူငယ် ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ဒီကလန် ရိုက်စ် ဟာ ယခင် ချယ်လ်ဆီး အကယ်ဒမီထွက် ကစားသမား တဦး လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ၎င်းဟာ လက်ရှိ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ နေရာရနေတဲ့ တမ်မီ အေဘရာဟမ် ၊ မေဆင်မောင့် ၊ ဖီကာယို တိုမိုရီ တို့နဲ့ တခေတ်တည်း အတူတူ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပါတယ် ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ကတည်းက ၊ အသက် ၉ နှစ် အရွယ် ကတည်းက ချယ်လ်ဆီး အကယ်ဒမီ မှာ ရှိနေခဲ့ဖူးတဲ့ ရိုက်စ် ဟာ အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ်ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း က ၎င်းကို အကယ်ဒမီ ကစားသမား စာရင်း ကနေ ထုတ်ပယ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကာ ၊ ကစားသမား ဘဝ ရှေ့ဆက်ဖို့ အတွက် အတော်လေး လမ်းပျောက်ခဲ့ရပါတယ် ။ ကံကောင်းစွာနဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း က ၎င်းရဲ့ အရည်အသွေး ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရကာ ၊ ၎င်းကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီကလန် ရိုက်စ် နဲ့ သူ့ တမိသားစုလုံး ဟာ ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ် တွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် ၊ သူ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကနေ အထုတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် ချယ်လ်ဆီး အသင်း အပေါ် နာကျည်းမှု တချို့တော့ ရှိလို့ နေပါတယ် ။ တချိန် က ချယ်လ်ဆီး အသင်း စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ လူငယ်လေး ဟာ အခု အခါမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး ကလပ် တချို့ ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၊ အာဆင်နယ် တို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်း ကို ရရှိနေကာ ၊ ၎င်းကို ထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကိုယ်တိုင် က ၎င်းကို ပြန်ပြီး စောင့်ကြည့်မှု တွေ ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ မနေ့က Soccer AM နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး မှာတော့ ဒီကလန် ရိုက်စ် က ချယ်လ်ဆီး ကနေ အထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ နေ့ဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ တလျှောက် အကြီးမားဆုံး စိတ်ပျက်ဖွယ် အခိုက်အတန့် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း အခုလို ဖွင့်ဟ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ် ။ ရိုက်စ် က ” ကျွန်တော် ဟာ အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ် မှာ ချယ်လ်ဆီး ကနေ အထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး စိတ်ပျက်ဖွယ် အခိုက်အတန့် ကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ် ။ အရိုးသားဆုံး ဝန်ခံရရင် ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် အရာရာ ပေးဆပ်ခဲ့ရပါတယ် ။ အသက် ၉ နှစ် ကနေ ၁၄ နှစ် အရွယ်ထိ တနေ့ပြီး တနေ့ ဒီ အကယ်ဒမီ မှာပဲ တနေ့တာ ကို ကျော်ဖြတ် ၊ လေ့ကျင့်မှု တွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှ အဆုံးသတ် ရလဒ် က ဒီ အသင်း ကနေ အထုတ်ခံခဲ့ရတာလား ဆိုတဲ့ အဖြေ အပေါ် ကျွန်တော် အကြီးအကျယ် ရှော့ခ်ရသွားခဲ့ပါတယ် ။ ” ” ဒီလိုမျိုး ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကနေ အထုတ်ခံရမယ် ဆိုတဲ့ စကား ကို ကျွန်တော် ကြားရလိမ့်မယ် လို့ တသက်နဲ့ တကိုယ် မထင်ထားခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကြားခဲ့ရပါပြီ ။ အဲ့ဒီနောက် ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ဖူလ်ဟမ် နဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း တွေက ကမ်းလှမ်းတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ် အခွင့်အရေး ကို ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ ” ” အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် ဟာ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကစားသမား ဘဝ ရဲ့ နောက်ထပ် စာမျက်နှာသစ် တခု ကို စတင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီ အခြေအနေ က အရမ်း ခက်ခဲမယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော့ ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တခု က ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမား တယောက် ဖြစ်လာဖို့ပါ ။ ” ” ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမား တယောက် ဖြစ်လာဖို့က လွဲပြီး တခြား အရာတွေ အတွက် ဘာမဆို ပေးဆပ်ခဲ့ရတာမျိုး ကျွန်တော့ ဘဝ မှာ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး ။ အဲ့ဒီတော့ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း မှာ ကျွန်တော် အကြိတ်အနယ် ကြိုးစားခဲ့တယ် ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပုံစံ ကို ပြသဖို့ အမြဲ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အတွက် ကျွန်တော် စတေးမှု တချို့ လုပ်ခဲ့ရပါတယ် ။ ” ” ကိုယ့်ရဲ့ မိဘ ရဲ့ နေအိမ် နဲ့ ဝေးတဲ့ နေရာ ကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ် ၊ အတွေ့အကြုံ အသစ် တွေ ရှာဖွေခဲ့ရပါတယ် ။ အခုတော့ ကျွန်တော် ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အားလုံး အတွက် ရရှိလာတဲ့ အသီးအပွင့် တွေကို ခံစားနေရပါပြီ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ SPORTS MYANMAR
လက်ရှိ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း ရဲ့ လူငယ် ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ဒီကလန် ရိုက်စ် ဟာ ယခင် ချယ်လ်ဆီး အကယ်ဒမီထွက် ကစားသမား တဦး လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ၎င်းဟာ လက်ရှိ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ နေရာရနေတဲ့ တမ်မီ အေဘရာဟမ် ၊ မေဆင်မောင့် ၊ ဖီကာယို …
ချယ်လ်ဆီး အကယ်ဒမီ သို့ ရောက်ရှိ လာကတည်းက သူ့ အနေနဲ့ သင်ယူ လေ့လာနေရတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ၃ဦး ရဲ့ အမည် ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ #ဂီလ်မာ
ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ နည်းပြသစ် ဖရန့် လမ်းပတ် လက်ထက် ၊ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ လူငယ် ကစားသမားကောင်း များစွာ နေရာရ ၊ ထွန်းတောက် လာကြပြီး ၊ အခု နောက်ဆုံး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လူငယ် ခြေတက် ကတော့ အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ် စကော့တလန် …
အူဘာမီယန်း အနေနဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ဘာကြောင့် မပြောင်းရွှေ့သင့်သလဲဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ခရိတ်ဘာလေ
ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူဟောင်း ခရိတ်ဘာလေ က အူဘာမီယန်း အနေနဲ့ လမ်းပတ် ရဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့မယ့် အစား ချန်ပီယံ ဆုကို ပိုမို စိန်ခေါ် နိုင်တဲ့ အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း အကြံဉာဏ် ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း တစ်နှစ်သာ …
ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲသာ ပြီးဆုံးအောင် မကစား နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်…ရူ့ဂူးလစ်
နယ်သာလန် အကျော်အမော် ဖြစ်သူ ရူ့ဂူးလစ်က အကယ်၍ လက်ရှိ ဘောလုံး ရာသီကို ပြီးဆုံးအောင် မကစား နိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေ ပြိုလဲ သွားနိုင်တယ်လို့ သတိပေး လိုက်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လက်ရှိ အချိန်မှာ ဘောလုံး ပွဲတွေ ရပ်နား ထားခဲ့ ရပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း တုန်းကတော့ ဒီရာသီ …
သူ့ရဲ့ အနာဂတ် အကြောင်းကို ပရိသတ် တစ်ဦးထံသို့ ဖုန်းဆက် ပြောပြ လိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် ပစ်မှတ် #မက်ဒီဆင်
ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီကို ခြုံငုံ ကြည့်ရှု လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တွေက အထူး အားရ ကျေနပ် စရာ မဖြစ် ခဲ့ရ ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ဘောလုံးပွဲ တွေကို ခေတ္တ္တ ရပ်ဆိုင်း ထားတဲ့ အချိန် မတိုင်မီ …
Previous 1 … 653 654 655 … 707 Next